सेयर बजारका लागि आगामी दिनहरु कत्तिको सकारात्मक रहला ? – Facebook Khabar
सेयर बजारका लागि आगामी दिनहरु कत्तिको सकारात्मक रहला ?
काठमाडौं : सेयर बजारमा उत्साह देखिएको छ । बजार २८ सय विन्दुमाथि रहेको छ । गत बुधबार करेक्सन मुडमा देखिएको बजारले बिहीबार फेरि गति लिएको हो । नेप्सेको पछिल्ला मुभमेन्टहरु अध्ययन गर्दा केही करेक्सनका बाबजुत पनि माथितिरकै यात्रा तय गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ ।
प्राविधिक विश्लेषकहरुले पनि विभिन्न सूचकहरुका आधारमा बजारमा बुलिस मोमेन्टम हावी भएको बताएका छन् । अब आइतबार ( माघ लागेपछि) बजार खुल्नेछ । छोटो अवधिमा बजारमा राम्रै वृद्धि भइसकेको छ ।
यसआधारमा कतिपयले अब नेप्से केही करेक्सन हुनुपर्ने र त्यसपछि फेरि बजारले नयाँ उचाई लिन सक्ने अनुमान लगाएका छन् । कतिपयले भने यसअघि छोटो अवधिमा बजार करिब ३०% घटिसकेकाले करेक्सनअघि नै बजार अझै वृद्धिकै क्रममा रहने आफ्ना तर्क पेश गरिरहेका छन् । तथापि, बजारको गति र प्रवृत्तिका बारेमा कसैले पनि ठोकुवा भने गर्न सक्दैन । विभिन्न तथ्यहरुलाइ आधार मानेर अनुमान र विश्लेषण गरिने मात्र हो ।
अनुमान गरिए अनुसार बजारले आफ्नो गति निर्धारण नगर्न पनि सक्छ । यसआधारमा लगानीकर्ताले स्वअध्ययन र रिस्क–रिवार्ड रेसियोलाई ख्याल गरेर लगानी सम्बन्धी निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । नीतिगत आधारमा भने सेयर बजारलाई सहज अवस्था रहेको छ । केन्द्रीय बैंक र अर्थ मन्त्रालयले पछिल्ला दिनहरुमा चालेका कदमले सेयर बजारका लगानीकर्ताहरु उत्साहित भएका हुन् ।
यसैगरी, माघ लागेसँग सरकारको पुँजीगत खर्च बढ्ने देखिएको छ । यसले पनि वित्तीय प्रणालीमा तरलता सहज बनाउन सहयोग पुग्नेछ । यस्तै, बढ्दो कोरोना संक्रमण र आयातमा गरिएका कडाईले पनि आन्तरिक बजारमा तरलता सहज बनाउन सहयोग पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
तर यही बेला पुस मसान्तमा ठूलो रकम कर, साँवा–ब्याज बुझाउँदा वित्तीय प्रणालीबाट केही रकम सरकारी खातामा गएको अवस्था पनि छ । यस्तै, माघ महिनाका लागि पनि वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपमा ब्याजदर बढाएका छैनन् । तरलता सहज हुँदै जाने अनुमानकै आधारमा बैंकहरुले ब्याजदर स्थिर राखेका हुन् । यी तथ्यहरुले पनि आगामी दिन सुखद् हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
अब चुनावी चहलपहल पनि बढ्दैछ । अहिलेको तयारी अुनसार आगामी वैशाख–जेठमा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनेछ । त्यसपछि संसदीय चुनावको पालो आउनेछ । यसआधारमा आगामी दिनहरुमा चुनावी चहलपहल बढ्नेछ । यसले पनि तरलता सहज बनाउनेछ । यी तथ्यहरुका बाबजुत आम लगानीकर्ताले ध्यान दिनुपर्ने प्रमुख पक्ष भनेको सेयर बजारमा उतारचढावहरु आइरन्छन् ।
तथापि, अहिले बजार समग्रमा बुल ट्रेन्डमा रहेको छ । यस्तो बेला बजारमा करेक्सन आए पनि वृद्धिदर त्यो भन्दा अझ बढी हुनेछ । यसर्थ, सबल वित्तीय सूचक भएका, राम्रो लाभांश क्षमता रहेका कम्पनीहरु छानेर योजनाबद्ध हिसाबले लगानी गर्न विश्लेषकहरुले सुझाव दिने गरेका छन् ।
नेप्से सूचक यस सता ६.१४% ले बढेर २८५७.७५ विन्दुमा बन्द भएको छ । गत साता नेप्से २६९२.४७ विन्दुमा बन्द भएको थियो । बिहीबार कारोबार रकम ६.६६ अर्ब रुपैयाँ र बजार पुँजीकरण ४० खर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ ।
हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीचको मर्जर प्रकृया भाँडियो